मेलानिया तिमी किन बोल्दिनौ ?
प्रकाशित मिति : २०७४ फाल्गुण २८ सोमबार , ६,३६६ पटक हेरिएको
मेलानिया ट्रम्प (फाइल फोटो)
काठमाडौं । बेला बेलमा आउने गरेका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका यौन काण्डले पत्रपत्रिकाका शीर्षक बन्ने गरेका छन् । तर पतिको यौनकाण्डबारे प्रथम महिला मेलानिया ट्रम्पले मुख नखोलेका देख्दा मान्छेहरु तीन छक परेका छन् ।
कारण मेलानियालाई उनीहरुले पूर्व प्रथम हिला हिलारी क्लिन्टनसँग तुलना गरेर हेर्ने गरेका छन् । ट्रम्पको जस्तै त नभनौं पूर्व राष्टपति बिल क्लिन्टन र मोनिका लेविन्स्कीको ह्वाइट हाउस यौन लीलाको विषयले चर्चा पाउन थालेपछि, हिलारीले मुख खोलेकी थिइन् संयमित बन्दै । बिल क्लिन्टनको यौन काण्ड सतहमा भएको केही दिनपछि हिलारी बोलिन् । तर सन् २००६ मा पोर्न स्टार स्टोर्मी डेनियल्ससँग भएको यौन सम्बन्धको ढाकछोप गर्न ट्रम्पका वकिलले १ लाख ३० हजार अमेरिकी डलर (झण्डै १ करोड ३४ लाख नेपाली रुपैयाँ) दिएको खुलासा भएको डेढ महिना बित्दासम्म पनि मेलानिया चुपचाप छन् ।
गत मंगलबार ट्रम्प बिरुद्ध पोर्न स्टार स्टोर्मी डेनिएल्सले उजुरी हालिन् । उनको वास्तविक नाम स्टेफानी क्लिफोर्ड । स्टोर्मी—ट्रम्प यौन काण्डले त्यतिबेला नयाँ मोड लियो, जतिबेला पोर्न स्टार डेनिएल्सले कतै कसैलाई केही नभन्ने शर्तमा यो रकम दिएको तर सम्झौतामा ट्रम्पको हस्ताक्षर नभएकोले सम्झौता अमान्य हुने भन्दै उजुरी हालिन् । अझै पनि प्रथम महिला मेलानिया मौन छन् ।
मेलानियाले पतिलाई तिरस्कार गर्न थालेको खबर भने सार्वजनिक भएका छन् । फेब्रुअरीको शुरुतिर ट्रम्पले गरेका स्टेट अफ दि युनियनको सम्बोधन कार्यक्रममा मेलानिया आफ्नै सुरमा एक्लै पुगिन् । त्यही महिनाको अलिक पछि जब ट्रम्पको अर्को यौनकाण्डको खबर बाहिरियो, प्रथम महिला मेलानिया, ट्रम्पसँग साउथ लन जानुको साटो आफैंले गाडी हाँकेर एउटा हवाइ शिविर पुगिन् । साउथ लनमा राष्टपति र प्रथम महिला सँगसँगै जाने परम्परा थियो । मेलानिया ट्रम्पका ह्वाइट हाउस प्रवक्ताले यसबारे बोल्न अस्वीकार गरेका छन्
यस्तै काण्डमा हिलारीको प्रसंग
सन् १९९८ को जनवरीमा ह्वाइट हाउसमै बिल क्लिन्टन र मोनिका लेविन्स्कीवीच यौन सम्बन्ध हुने गरेको खुलासा भएपछि, बिल पत्नी हिलारी जमेर श्रीमान्को पक्षमा देखिइन् । यौनकाण्डको आरोप लागेको एकसाता पछि जनवरी २७ मा हिलारीले एनबीसी न्यूजमा अन्तरवार्ता दिइन्, जहाँ उनले खुला दिलले श्रीमान्को बचाउ गरिन् ।
हिलारीले भनिन्, यो “एकदम षडयन्त्रपूर्ण अभियोग हो“ । उनलाई सोधियो, लेविन्स्कीसँगको सम्बन्धबारे पति बिल क्लिन्टनले केही भनेका छन् ? क्लिन्टनले जवाफमा भनिन्, “हामीले यो विषयमा लामो बहस गरेका छौं, मलाई लाग्छ, जब यो विषय खुल्छ, सारा देशले थप जानकारी पाउनेछ''। केही दिनपछि फेब्रुअरी ११ मा हिलारीले अनुमान गरिन्, “बिल क्लिन्टनमाथिको आरोप केही समयपछि आफैं बिलाएर जानेछ किनकी यो विषय आफैंमा हल्काफुल्का खालको छ'' ।
अहिले मेलानिया जस्तो ऊ बेला हिलारी क्लिन्टन सार्वजनिक ठाउँमा पतिसँग टाढिएकी थिइनन्, उनले पति बिललाई पुरापुर समर्थन गरेकी थिइन् र बिलले परिस्थिति राम्रोसँग सम्हालिरहेका छन् भनेकी थिइन् । कतिसम्म भने बिल क्लिन्टनलाई प्रतिनिधिसभामा महाअभियोग लगाउने सम्मको परिस्थिति आउँदा पनि हिलारीले पतिको साथ छाडिनन्, साथ दिइरहिन् । हिलारीका तत्कालिन मित्र एवं विश्वासपात्र डेनी ब्लेयरले भनेका छन्, बिलका लागि हिलारीले यतिसम्म भनेकी छन् कि “उनले यसबाट छुटकारा पाउन खोजेका छन्, टाढिन खोजेका छन्, आत्मालाप गर्न खोजेका छन्, तर परिस्थिति यस्तो बनेको छ कि यो नियन्त्रणभन्दा बाहिर गइसकेको छ“ ।
जब हिलारीले संस्मरणात्मक किताब लिभिङ हिष्ट्री निकालिन्, त्यसमा लेखेकी छन्, “स्तब्ध थिएँ, अक्क न बक्क थिएँ, मुटु नै टुक्र्याउने खोलको र अति क्रोधित पनि बनाएको थियो । बिलसँग रुँदै चिच्याउँदै कराउँदै “तिमीले के सोचेको छ? के गर्न खोजेको ? के भन्दैछौ ? मलाई किन ढाँटिस् भन्दै कराएँ'' ।
वर्तमान राष्ट्रपति दम्पत्ति निकट दुुईजनाले ले न्यू योर्क टाइम्सलाई भनेका छन्, “स्टोर्मीलाई ट्रम्पले रकम दिएको रिपोर्ट सुनेपछि मेलानियाले आँखा चिम्लिइन् र उग्र बनिन् तर हिलारीले जस्तो उनले केही जात गरेकी छैनन्''। अचम्मै छः मेलानिया पतिको यौनकाण्डबारे बोल्दिनन् चाहिँ किन ?? (एजेन्सीहरुको सहयोगमा)
उत्तर कोरियाको चेतावनीपछि ट्रम्पद्धारा बचाउ